တရားဝင်အာမခံကိုမဆုံးရှုံးဘဲ Huawei P8 Lite ကို Android M သို့မွမ်းမံနည်း။ | Androidsis
တရားဝင်အာမခံကိုမဆုံးရှုံးဘဲ Huawei P8 Lite ကို Android M သို့မွမ်းမံခြင်း။
Francisco Ruiz | | Huawei, လဲ tutorial
နောက်လက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာမှာမင်းကိုငါသင်ပြမယ် နောက်ဆုံးသတင်း Huawei က P8 Lite ကို Android M သို့ ဖြတ်. Huawei ၏တရားဝင် firmwareupdate ကို OTA နှင့်ဤအရာများမှတစ်ဆင့်ပင် ကျော်လွန်၍ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပါ Terminal ရဲ့တရားဝင်အာမခံကိုမဆုံးရှုံးစေရ.
ဤတရားဝင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်နှင့်ဖိုင်များဤနေရာတွင်မျှဝေသည် ၎င်းသည် Huawei P8 Lite ALE21 မော်ဒယ်အတွက်သာတရားဝင်သည်ထို့ကြောင့်အခြား Huawei P8 Lite မော်ဒယ်လ်ရှိသူ ALE23 ကဲ့သို့သောသူများသည်ကွန်ရက်နှင့်အထူးဖိုရမ်များတွင်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းနှင့်ထိုပုံစံကိုအသစ်ပြောင်းရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များကိုရှာဖွေသည်။
1 Huawei P8 Lite ကို Android M သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များ
2 Huawei P8 Lite ကို Android M သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များ
3 ဗီဒီယို - Huawei P8 Lite ကို Android M သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
Huawei P8 Lite ကို Android M သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များ
တစ်ဦးရှိ Huawei P8 Lite မော်ဒယ် ALE21 ထူးခြားတဲ့နှင့်သီးသန့်။
ရှိသည် 100 x ကို 100 အားသွင်းဘက်ထရီ ၎င်း၏စွမ်းရည်၏။
Huawei P8 Lite ၏သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သိုလှောင်ရန်နေရာလုံလောက်စွာထားပါ။
အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဖိုင်များကို Download လုပ်ပါ အန်းဒရွိုက် M က
Huawei P8 Lite ကို Android M သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များ
ပထမတစ်ခုအနေဖြင့်အလေးချိန် ၁၀၀ megabytes ရှိရုံမျှသာမက၊ Huawei သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့်တိုးမြှင့်မှုဆိုင်ရာ update ကိုလည်းဒေါင်းလုပ်ချရန်လိုအပ်သည်။ တည်ဆောက် B5.0.1 အတွက် Android 188။ ဒီ update လေးနည်းနည်းဖြာလိုက်တာနဲ့ Android 6.0 Marsmallow ၏ Firmware ကို download လုပ်ရပါမည်၁.၀၉ Gb အလေးချိန်ရှိသော firmware ။ ဖိုင်နှစ်ခုလုံးကို download လုပ်ရန်တိုက်ရိုက် link တစ်ခုဖြစ်သည်။
Huawei P6.0 Lite အတွက်တရားဝင် Android 8 Marshmallow firmware
ဒီနှစ်ခုလုံးဟာ update.zip လို့ခေါ်တဲ့ဖိုင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိရပါ။ ဒါကြောင့်သင်မွမ်းမံမှုကိုပထမ ဦး ဆုံးဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ၊ သင်မွမ်းမံတော့မည့် Huawei P8 Lite သို့ကူးယူပြီးပထမအကြိမ် update ပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်ဒုတိယ zip ဖိုင်ကိုကူးယူပါ။ မဟုတ်လျှင်ကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးတ ဦး တည်းကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် ၎င်းကို update.zip (1) အနေဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲမည်ဖြစ်ပြီး Huawei မွမ်းမံသည့် application သည်၎င်းကို update package တစ်ခုအနေဖြင့်မတွေ့သောကြောင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ပထမဆုံး update.zip ကို download လုပ်ပြီးတာနဲ့ ၎င်းကို Huawei P8 Lite ၏အတွင်းသိုသိုမဟုတ်ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်သို့ dload အမည်ပါသောဖိုင်တွဲတစ်ခုထဲသို့ကူးယူပါမည်အကယ်၍ ဖိုင်တွဲတည်ရှိပြီးဖြစ်ပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ကူးယူပြီး၎င်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei ၏ကိုယ်ပိုင်ဖိုင်စူးစမ်းသူမှဖန်တီးမည်။
ဤအရာပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ပူးတွဲပါဗီဒီယိုတွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ Huawei P8 Lite ကို android အဆင့်သို့အဆင့်တစ်ဆင့်အဆင့်မြှင့်ပါ.
ဗီဒီယို - Huawei P8 Lite ကို Android M သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » တရားဝင်အာမခံကိုမဆုံးရှုံးဘဲ Huawei P8 Lite ကို Android M သို့မွမ်းမံခြင်း။
64 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ငါ၌ဗားရှင်း 5.0.2 ရှိပါကကျွန်ုပ်သည် 6.0 သို့အဆင့်မြှင့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ရမည်။
ဗွီဒီယိုထဲမှာငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း B188 မှာအဆုံးသတ်မယ့် Android Lollipop ဟာ firmware ဗားရှင်းမှာရှိနေတယ်၊ ​​အကယ်လို့သင်အဲဒီဗားရှင်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်၊ နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုလိုက်ရုံနဲ့ Android 6.0 ကိုတိုက်ရိုက်မွမ်းမံနိုင်တယ်။ အကယ်၍ သင် B170 သို့မဟုတ်အောက်သို့ရောက်နေပါကသင်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် B188 သို့တရားဝင် Android M ကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာမွမ်းမံရန်အဆင့်မြှင့်တင်ရပါလိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါ။ Android 6.0 အသစ်ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးပါပြီ။ မကြိုက်ပါ။ လည်ပတ်မှုစနစ်သို့ယခင်အတိုင်း ပြန်၍ ၅.၁ သို့ဖြစ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်အားပြောပြပါ။ ဒါက ၁၇၀/၁၈၈ မှာအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့တစ်ခုပါ။
ငါကဒါကိုမကြိုက်ပါ၊ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ .. ပြန် Lollipop သို့သွားရန်
ကျွန်ုပ်၏ p8 ကို update လုပ်ပါ။ visitor mode နှင့် owner mode ကိုဝင်ရန်ကျွန်ုပ်ရွေးစရာကိုမတွေ့ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ဗီဒီယိုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီး B188 အထုပ်ကိုကျွန်ုပ် download လုပ်၍ မရပါ။ သင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အခြား link တစ်ခု post နိုင်မလား။ android 6.0 file ကို mega ကနေကောင်းမွန်စွာကူးယူပြီးပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Esteban Barrera ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ p8 lite version United States ale-l04v 100r1c00b124 ရှိရင်ငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးမယ်။ ငါ lollipop ကို update လုပ်ချင်တယ်။ ငါ့ကိုငါ့ကို video bone link ဗီဒီယိုပို့ပေးပါ။ ဆဲလ်ဖုန်းကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့တရားဝင် links တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Esteban Barrera အားပြန်ပြောပါ
+ 244 931792884 ဟုသူကပြောသည်
or meu huawei eo ALE-L21C185B130
ကျွန်ုပ်မည်ကဲ့သို့အမှာယူ (သို့) မွမ်းမံရမည်နည်း။
+244 931792884 သို့ပြန်ပြောပါ
နောက်ဆုံးပေါ် OTA မှတစ်ဆင့်ထွက်ပေါ်လာရန်အချိန်ဘယ်လောက်ယူပါသလဲ။
အော်စကာ Altares ဟုသူကပြောသည်
ငါ b188 ၏ zip update ကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး Huawei ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို ၄% သို့တင်သောအခါ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းပြန်လည်စတင်သည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယင်းကိုမွမ်းမံရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Oscar Altares အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းလ်တွင် root ခွင့်ပြုချက်မရှိပါက၎င်းကို root မလုပ်လိုပါ။
တပ်ဆင်ရန်နှင့်သင်အမှားမရရှိပါကသင့်၌ရှိသည့်သင်၏ဗားရှင်းကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဥပမာ al21 -132 b132 ထက်နိမ့်သောဗားရှင်းဖြစ်ပါက၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ အဲဒီမှာ b170 သို့ b188 သို့နောက်ဆုံး android 6.0 သို့အဆင့်မြှင့်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌၎င်းသည် b160 ဗားရှင်း၌ရှိပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအမှားတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နိုင်သနည်း b170 သို့ကျွန်ုပ်မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း။
မင်္ဂလာပါရှောလု၊ ငါ ale-l21 b120 ရှိတယ်။ ထပ်ဆင့်တည်ဆောက်မှုကိုဘယ်မှာရှာရမည်နည်း။ ဥပမာ - b132? ငါမအောင်မြင်ဘဲစာမျက်နှာများစွာကိုရှာဖွေခဲ့သည်။
ဟိုဆေးအန်တိုနီယို Flores ဟုသူကပြောသည်
သငျသညျ Bootloader ကိုသော့ဖွင့်ရန်ရှိသည်
ရီကာဒို rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ငါဒီ update ကို ale 23 နှင့်သက်ဆိုင်လျှင်ငါသိချင်တယ်
ငါ့ terminal ကိုမထိခိုက်စေချင်ဘူး
ricardo rodriguez သို့ပြန်သွားရန်
ဟိုင်းမင်းငါထင်တာက ale 23 အတွက်မဟုတ်ဘူး၊ ale 21 အတွက်ပဲ
MA L ကိုပြန်ပြောပါ
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏လက်ကိုင်ဖုန်းဟာအမြစ်ဖြစ်ပါကပြaနာရှိသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
P. Barro ဟုသူကပြောသည်
ပျက်ကွက်မှု ၄% သိသာထင်ရှားတဲ့အရာ, ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာကောင်းစွာရှင်းပြသည်မဟုတ်ပါ။ စာမျက်နှာ၏စီမံခန့်ခွဲသူများထံမှတုန့်ပြန်မှုကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ပါလိမ့်မည်။
P. Barro အားပြန်ပြောပါ
သင့်ကိုကူညီမယ့် ​​link တစ်ခုဒီမှာ။ http://www.htcmania.com/showthread.php?t=1090761
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဗီဒီယိုနှင့်အတူတူပင်မိုဘိုင်းနှင့်တူညီသောဗားရှင်းရှိပြီးကျွန်ုပ်ပထမအဆင့်တွင်လုပ်ငန်းစဉ်၏ ၄% ရှိသည့် update အမှားကိုကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည်။
ငါ lollipop ၏ beta ကိုအတူဖြစ်ပျက်နှင့်ငါလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဆုံးမှာအခြားနေရာမှအခန်းတစ်ခန်းကိုထပ်လျှော့ချ။
Carlos နယ်ပယ် ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဗီဒီယိုနှင့်အတူတူပင်မိုဘိုင်းနှင့်တူညီသောဗားရှင်း ရှိ၍ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်၏ ၄% ရှိသောပထမခြေလှမ်းတွင်ကျွန်ုပ်အားအဆင့်မြှင့်တင်မှုအမှားကိုပေးသည်။
carlos arenas မှပြန်ကြားချက်
၎င်းကို 6.0 beta မှ 5.0 p8, lite သို့လျှော့ချနိုင်ပါသလား။
Jesus osuna ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏မော်ဒယ် ale123 ။ ငါမက္ကဆီကိုမှဖြစ်ပြီးဗားရှင်း ၅.၁ မှာဖြစ်နိုင်ပါသလား။
Jesus osuna ကိုပြန်ပြောပါ
Felipe Arias ဟုသူကပြောသည်
ဟေးအမျိုးသားတွေခင်ဗျားရဲ့ ၅.၁ ရှိပုံကိုသိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Felipe Arias ကိုပြန်ပြောပါ
ဟင်နရီ Reyes ဟုသူကပြောသည်
ငါ B188 ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီဖြစ်ပေမယ့် android M ကိုအဆင့်မြှင့်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲမွမ်းမံမှုမအောင်မြင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
ဟင်နရီ Reyes ကိုပြန်ပြောပါ
သူတို့ကို rcar ဟုသူကပြောသည်
မိုင်း ALE-L23 V100R001C178B247 ဒီ terminal အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းများရှိပါသလား။
Hello link ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
B188 ဖိုင်လင့်ခ်သည်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ အခြားတစ်ခုထပ်ထည့်နိုင်သည်လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Juan Angel Ayala ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တွင်လိမ္မော်ရောင်မှ p8 lite ရှိသည်။ Huawei မှလိမ္မော်ရောင်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် p8 lite -orange -spain -B170 ဖြစ်သည်။ ငါ balongC50B311 ဟုခေါ်သော rom ကိုသိမ်းသည်။ ဖုန်းကအခမဲ့ပါ၊ ဒါပေမယ့်လိမ္မော်ရောင်ကနေ update လုပ်လို့ရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်လိမ္မော်ရောင်ကနေဖြစ်ရမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
juan angel ayala သို့ပြန်သွားရန်
မေးခွန်းတစ်ခု၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဤအပ်ဒိတ်ကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်၏အော်ပရေတာကပိတ်ဆို့ထားသော dual sim function ကိုသုံးနိုင်သလား။
Cristina Miranda သင်းအုပ်ဆရာ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ Huawei P8 Lite ဗားရှင်း ALE-L21 B170 android ဗားရှင်း ၅.၀ (၃.၁) ရှိပြီး link ကို B5.0 သို့အဆင့်မြှင့်တင်သောအခါ၎င်းသည်မရရှိနိုင်ကြောင်း၊ ပြproblemsနာမရှိဘဲမွမ်းမံမှုများ ပြုလုပ်၍ ကျွန်ုပ်အားကူညီနိုင်သူဟုဆိုပါသလား။ ☺
Cristina Miranda သင်းအုပ်ဆရာအားပြန်လည်ပြောဆိုပါ
ဒံယလေသ Chavarria Barboza ။ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် P8 Lite ALE-L02 ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် B120 ဖြစ်ပါကမည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်နည်း။
ငါ့မှာ B170 အထုပ်ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုငါ့အားမဖတ်ပါ
အထုပ်သည် Lara ALE-21 ဟုတ်မဟုတ်ဆိုသည်မှာအရေးမကြီးပါ။
Daniel Chavarria Barboza အားပြန်ပြောပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ Huawei အမှတ်တံဆိပ်ထက် ကျော်လွန်၍ ဘာလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
John quiroz ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ Huawei P8 ALE-23C40B130 ရှိပြီးကျွန်ုပ်မွမ်းမံနိုင်ပါသလား ???? ငါပီရူးကနေငါ့ကိုကူညီနိုင်
John Quiroz အားပြန်ပြောပါ
သင့်တွင် ale 23 ကို၎င်းကို ale 21 သို့ပြောင်းလဲပါကဒုတိယ sim ကိုမည်သို့ enable လုပ်ရမည်ကိုရှာဖွေပါ။ ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းသည် ale 21 တွင်ကျန်နေပါကသင် update 170 ကိုတပ်ဆင်ပြီးယခုသင်ခန်းစာကိုဆက်လက်လေ့လာပါ။
၎င်းကို ale 21 သို့မပို့ပါနှင့်။ ale 23 သည်ငယ်သည်၊ ၎င်းတွင် ale 21 ၌မရှိသောအရာများရှိသည်။ ale 23 အတွက် update ကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံး။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် ale23 b180 ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်ထုတ်ဝေနိုင်ပါသည်။ သင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည့်ဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားပြီးသော်လည်းကျွန်ုပ်ကို ၂% အထိသာတင်ပေးနိုင်ပြီးအမှားတစ်ခုသတိပြုမိသည်။
marco Antonio villamizar ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ Update.zip Build B188 Huawei P8 Lite ဖိုင်ကို၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်မပေါ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်မည်သည့်နေရာတွင် download လုပ်နိုင်သည်ကိုပြောပြပါ။
marco antonio villamizar အားပြန်ပြောပါ
ဒံယလေ Acevedo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အဆင့်မြှင့်ပြီးပါပြီ။ မော်ဒယ်လ်က“ hi6210sft” လို့ဆိုတယ်။ ကျွန်တော့်ဆဲလ်ဖုန်းက L21 ပါ
Daniel Acevedo အားပြန်ပြောပါ
အလွန်ကောင်းပါတယ်၊ ငါမှာ software ပြaနာရှိနေသေးတဲ့ပြaနာတစ်ခုရှိတယ်၊ ဒါက android M ကိုမွမ်းမံခင်၊ စတုရန်းကိုဖိထားခြင်းအားဖြင့်၊ ငါအရင်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ application ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် M ကိုမွမ်းမံတဲ့အခါ ငါ့ကိုဒီထက်ပိုလုပ်ပေးလိမ့်မယ် အဘယ်အကြောင်းကြောင့်နည်း၊
Francisco ကျွန်တော် b188 ကိုသွားတဲ့အခါအမှားတစ်ခုရတယ်။ ၄% ကရပ်တယ်။
က Nicolas ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း၊ ကိုလံဘီယာမှကျွန်ုပ်နှင့်စကားပြောနေပြီး၊ ဒီဖြစ်စဉ်သည် ale-23 အတွက်အလုပ်လုပ်ပါသလားသို့မဟုတ်၎င်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမယ့်အခြားဖိုင်များရှိမရှိကိုသိလိုပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါဗားရှင်းနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ terminal သည် ALE-L02C106B130 မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတွင်ဖော်ပြပါ terminal အတွက်…
Marta Perez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီးပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားဒေသခံအဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုတွေ့ရှိသည်။ သို့သော် ၄% သို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားပြaနာတစ်ခုဖြစ်စေပြီး၊
Marta Perez အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ b194 ကို android6သို့မွမ်းမံနိုင်ပါသလား။ ဒီကဒါငါလုပ်သင့်တယ်ဘယ်လို
ဟဲလို၊ ပထမဆုံး link လိုအပ်ပါသလား ဒါကြောင့်ပေါ်လာပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
Erick pacheco ဟုသူကပြောသည်
http://guidebeats.com/2016/02/18/update-huawei-p8-lite-ale-l21-to-lollipop-b188-ota-firmware-europe/ 188 ကို download လုပ်ရန်အချို့လင့်ခ်ရှိပါတယ်
Erick Pacheco အားစာပြန်ပါ
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=1136288 ဒီသင်ခန်းစာနဲ့သူတို့ ALE-L23 ကနေ ALE-L21 ကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က open bootloader လိုပါတယ်။ ale21 မရောက်ခင်အထိ root နောက်သို့လိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းသည် p8 lite ale-l02 မော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်နားလည်ပါသည်တရားဝင် version ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သောမော်ဒယ်လ်အတွက်တရားဝင် update (တရားဝင်) သည်အာရှဒေသမှဖြစ်သည်။ ငါလိုအပ်ချက်များကိုဖတ်ပြီးသူတို့အတူတူ, ဒါပေမယ့်သူကဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုပြaနာတစ်ခုပေးလိမ့်မည်ဆိုပါက၎င်းသည်လုပ်ဖို့မှန်ကန်သောအရာဟုတ်မဟုတ်ရှိမရှိအပေါ်သံသယရှိသည်။ ကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီ update နဲ့အတူ mobile မှာ gyroscope ရှိနိုင်လား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ရှိသောပြproblemနာမှာ Huawei P8 Lite ကို Orange တွင် ၀ ယ်ခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ compiler code သည်ဥရောပမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကို Android Marshmallow သို့မွမ်းမံနိုင်ပါ။ ဥရောပကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ကုဒ်နံပါတ် ALE-L21C109B170 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်😀
Miguel Angel ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် alui-l21c432b194 ဗားရှင်းရှိပြီး emui 3.1 android 5.0.1 ဗားရှင်းကျွန်ုပ်သည် b188 ကို ၆.၀ android အတွက်အသုံးပြုရမည်။
miguel angel သို့ပြန်သွားရန်
Juan Carlos Mora ဟုသူကပြောသည်
update ကို link ကိုဆင်းသည်အကူအညီကျေးဇူးပြုပြီး !!!
Juan Carlos Mora ကိုပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါအရမ်းကောင်းတယ်ကောင်းလိုက်တာ။ ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာမိုဘိုင်းကို root လုပ်လို့ရမလားမသိချင်ဘူး။ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ကျွန်တော့်ကိုဘယ်လိုအကြံပေးမလဲ။
matias valdez ဟုသူကပြောသည်
ငါ b120 ရှိတယ်။ အဲဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ ဗီဒီယိုရဲ့ပထမဆုံးချိတ်ဆက်မှုကပြတ်သွားတယ်
matias valdez သို့ပြန်သွားရန်
ငါ့မှာ b120 ရှိတယ်။ ငါဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့အရာကငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ မင်းငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။
ရိုးသားစွာ !! hello FRIEND, ငါသင်ခန်းစာ၏ခြေလှမ်းများကိုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါငါ recovery mode ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲကိုမအောင်မြင် !!
သငျသညျအကြှနျုပျကို cable ကိုပေးဖို့တောင်းလျှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
[APK] Android 5.0+ ဖြင့်သင်၏ Xperia တွင် Sony launcher "Concept for Marshmallow" အသစ်ကိုထည့်ပါ
Terminal ၁၀၀ တွင် ၁.၂ သာလျှင် Android 1,2 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်